Hamropusta.com-Nepali Online News Portalनेपाली मन्दिर बनाउन पैसा खर्च गर्छन् तर आविष्कारमा गर्दैनन्–महावीर पुन (अन्तर्वार्ता) – Hamropusta.com-Nepali Online News Portal
२०७६ भाद्र १५, आईतवार
पढ्ने समय : 13 मिनेट
– म्याग्दीको नाङ्गी गाउँमा जन्मेर नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो, पारिवारीक अबस्था बताइदिनुस् न ? कसरी यो स्थानसम्म पुग्नुभयो ?
तपाईलाई थाहा छ कि छैन, मैले पाएको सबै पुरस्कार बेच्न भनेर अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा केटाहरुलाई बेच्न भनेको छु । सबै पुरस्कार बेचिसकेको छु । त्यही भएर अहिले मैले सबैलाई थर्काउँछु, पुरस्कार नदेउ दियौ भने मैले बेच्दिन्छु भनेर । म्यागासेसे पुरस्कार पनि २ वर्षदेखि बेच्नका लागि राखेको छु । त्यो पैसा आविस्कारका लागि प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ भनेर त्यो गरेको हो ।